UWilliam Henry Harrison Biography - UMongameli wesithoba waseMelika
UWilliam Henry Harrison yoBuntwana kunye neMfundo:
UWilliam Henry Harrison wazalwa ngoFebhuwari 9, 1773. Wazalwa kwintsapho ekhuthelekileyo kwezopolitiko ngezizukulwana ezingaphambi kwakhe ekhonza kwiofisi yezopolitiko. Indlu yakhe yahlaselwa ngexesha leNguqulelo yaseMelika . IHarrison yafundiswa njengobutsha kwaye yagqiba ekubeni ngugqirha. Waya kwi-Academy eSouthampton County ngaphambi kokungena kwiYunivesithi yasePennsylvania Medical School.
Ekugqibeleni wagxotha xa engenakukwazi ukuyifumana kwaye wajoyina umkhosi.
UHarrison wayeyindodana kaBhenjamin Harrison V, umsayina weSibhengezo soBu-Independence, no-Elizabeth Bassett. Wayenodade abane kunye nabazalwana ababini. NgoNovemba 22, ngo-1795, watshata no-Anna Tuthill Symmes, intombi efundiswe kakuhle kunye nosapho olucebileyo. Uyise wayengafuni ukuba umtshato wabo uvakalelwa kukuba umkhosi wawungeyona nto ekhethileyo yokukhetha umsebenzi. Bonke babenamadodana ezintlanu kunye neentombi ezine. Indodana enye, uJohn Scott, yayiza kuba nguyise we-23rd president, uBenjamin Harrison .
UWilliam Henry Harrison Military Career:
UHarrison wajoyina umkhosi ngo-1791 waza wakhonza kwada kwa-1798. Ngelo xesha, walwa kwiiMfazwe zaseNdiya kwi-Northwest Territory. Wadunyiswa njengeqhawe kwi-Battle of Timber Timbers ngo-1794 apho yena namadoda akhe babamba umgca. Waba ngumthetheli ngaphambi kokuba ashiye. Emva koko wabamba iiofisi zomntu de wajoyina umkhosi kwakhona ukulwa neMfazwe ka-1812 .
IHarrison yaqalisa iMfazwe ye-1812 njengoMagosa Jikelele weeKentucky kwaye yaphela njengeGosa Jikelele leMntla eNtshona-ntshona. Wahokela umkhosi wakhe ukuba athathe iDetroit. Emva koko wabulala amabutho aseBritani namaNdiya kuquka uTecumseh kwiMfazwe yaseThames. Washiya emkhosini ngoMeyi, ngo-1814.
Umsebenzi ngaphambi koMongameli:
UHarrison washiya umkhosi wemikhosi ngo-1798 ukuba abe nguNobhala weNorthwest Territory (1798-9) waza waba nguMphathiswa weNorthwest Territory kwiNdlu (1799-1800) ngaphambi kokuba aqokwe iRhuluneli ye-Indian Territories (1800-12). Le nto yenziwa xa iTippecanoe yenzeka (jonga ngezantsi). Emva kweMfazwe ka-1812, wanyulwa ummeli wase-US (1816-19) kwaye emva koko uSenator State (1819-21). Ukususela ngo-1825-8, wayekhonza njengeSenator yase - US . Wathunyelwa njengoMphathiswa wase-US eK Columbia ukusuka ngo-1828-9.
U-Tippecanoe noTecumseh Uthuka:
Ngomnyaka we-1811, iHarrison yayikhokelela iqela lokulwa ne-Indian Confederacy e-Indiana. UTecumseh kunye nomntakwabo uMprofeti babeyizinkokheli ze-Confederacy. Abantu baseMerika bahlasela uHarrison namadoda akhe ngelixa belele eTippecanoe Creek . Ngokukhawuleza uHarrison wahola amadoda akhe ukuba ayeke abahlaseli aze atshise idolophu ebizwa ngokuthi iProststown. Abaninzi babeza kuthi ukufa kukaHarrison njengoMongameli ngokumalunga noTecumseh Curse .
UHarrison akazange aphumelele ukulungiselela uMongameli ngo-1836 kwaye wabizwa ngowe-1840 noYohn Tyler njengoViceli wakhe wongameli . Wayexhaswa nguMongameli uMartin Van Buren . Olu lonyulo lubhekwa njengolukhankaso lwangoku olubandakanya ukupapashwa kunye nokunye.
UHarrison wayethole isitizo se "Old Tippecanoe" waza wagijima phantsi kwesiqubulo esithi "Tippecanoe noTyler Too." Wawunqoba ngokunyanisekileyo ukhetho kunye nama-234 angama-294 amavoti okhetho .
Ulawulo lukaWilliam Henry Harrison kunye nokufa kwi-Ofisi:
Xa iHarrison yathatha isikhundla, wanika idilesi edele kakhulu yokutyhila ekhulwini kwiyure kunye nemizuzu engama-40. Yanikezelwa kubanda ngexesha lenyanga kaMatshi. Emva koko wabanjwa emvula kwaye ekugqibeleni wehla ngokubanda. Ukugula kwakhe kwanda ngakumbi kwada wafa ngo-Ephreli 4, 1841. Akazange abe nexesha lokufezekisa ezininzi kwaye wayichitha ixesha elide elijongene nabafuna umsebenzi.
UWilliam Henry Harrison wayengekho kwixesha elide ukwenzela ukuba abe nefuthe elikhulu. Wayekhonza kuphela inyanga enye, ukususela ngoMatshi 4 ukuya ku-Ephreli 4, 1841. Wayengumongameli wokuqala ukufa eofisini.
Ngokuhambelana nomGaqo-siseko, uJohn Tyler uthatha uongameli.
AbaPhathiswa ababengabaMkhosi baseMkhosini
9 AbaPhathiswa ababengamaGarha
Indlela yokusebenzisa iilwimi zesiTshayina
Icala leNkundla yaseKorematsu v. United States
Indlela Yokusinda Kwintlanganiso YeBaboon